Papa Joany XXIII sy Joany Paoly II ho olomasina - Fihirana Katolika Malagasy
Papa Joany XXIII sy Joany Paoly II ho olomasina
Amin'ny 27 aprily 2014 no hasandratra ho olomasina ny Papa Joany XXIII sy ny Papa Joany Paoly II ary eto Vatikana Roma no hanaovana izany. Fotoan-dehibe ho an'ny Katolika izany ary koa ho an'ireo olona rehetra izay nomarihin'ny toe-panahy nananan'ireto Papa roa ireto ny fiainany. Tsy ny Katolika ihany mantsy no mahalala ireo Papa roa ireo satria ny Papa Joany XXIII izay nanokatra ny Konsily Vatikana faharoa dia Papa izay isan'ny nisokatra voalohany tamin'ireo kristianina rehetra maneran-tany. Ny Konsily Vatikana Faharoa rahateo dia mitory ny fisokafan'ny Fiangonana. Ny Papa Joany Paoly II kosa indray dia nisantatra ny famangiana firenena maro maneran-tany sy nihaona tamin'ireo filoham-pinoana isan-karazany. Koa azo lazaina fa fety lehibe ho an'izao tontolo izao mihitsy ny 27 aprily izay hanambaran'ny Fiangonana ampahibemaso fa masim-piaina ka azo alain-tahaka ireto Papa roa ireto.
Mialoha ny 27 dia misy ireo fiomanana isan-karazany izay atao any fiangonana isan-tsokajiny. Raha ny eto Roma manokana dia toa izao ny fandaharam-potoana.
22 Aprily: amin'ny 8 sy sasany alina dia fihaonana ho an'ny tanora hanomanana ny fanandratana ho olomasina. Ao amin'ny Bazilikan'i Md. Joany ao Laterano (Roma) no anaovana izany.
26 Aprily: manomboka amin'ny 9 ora alina dia hisokatra ny fiangonana maromaro eto Roma ka hisy alim-bavaka sy fikofesena mandritra izany. Ireto ireo fiangonana hisokatra
Piazza del Gesù, 00186 ROMA ITA, SPA
27 aprily: Amin'ny 10 ora Lamesa lehibe hanandratana ho olomasina ny Papa Joany XXIII sy Papa Joany Paoly II eo amin'ny tany malalak'i Md. Piera Vatikana. Marihina fa tsy misy tapakila hozaraina toa ny mahazatra amin'io fa fidirana malalaka.
28 aprily: amin'ny 10 ora. Lamesa fisaorana an'Andriamanitra eo amin'ny tany malalaka Md. Piera Vatikana
Araka ny nambaran'ny Eveka Malagasy izay nandalo teto Roma tamin'ny fara'ny volana marsa teo dia ny kristianina malagasy eto Roma no nangatahan'izy ireo hisolo tena ny Malagasy rehetra izay tsy afaka manatrika izany fotoan-dehibe izany.
Nasandratra ho olomasina ny Papa Joany XXIII sy Joany Paoly II >